Skin Witch: nyowani inotyisa zita inouya kuLinux | Linux Vakapindwa muropa
Ganda Witch: nyowani inotyisa zita inouya kuLinux
Ganda Muroyi izita rekutyisa rinotyisa iro richava nerutsigiro rweLinux neMac mushure mekuburitswa kwewindows vhezheni. Mutambo wevhidhiyo waunofanirwa kunongedzera pane iwo runyorwa rwekuti painowanikwa riini paStam, kunyanya kana iwe uchida mitambo inotyisa. Uye zvakare, ndeimwe yeayo indie mitambo ivo yavanofarira zvakanyanya.
Gadzirwa na mushambadzi Blackwood Specter. Zvinotarisirwa kuti mugadziri achapa zita iri reWindows mwedzi uno, kuitira kuti munhu wese agone kurodhaunura kubva kuchitoro chakakurumbira ValvesSteam. Kunyanya, zvinotarisirwa muna Chivabvu 22. Mushure meizvozvo, chiteshi cheMacOS neLinux hachifanirwe kutora nguva yakareba.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve Skin Witch, iti kuti ndeimwe chete mutambi vhidhiyo mutambo, ine kugona kusarudza akawanda zvombo, ine akawanda vavengi uye akasarudzika mapuzzle. Iyo yakavakirwa pane inotyisa nyaya kuburikidza akati wandei akasiyana mamiriro uye pamwe nemukana wekuve nayo matambudziko akawanda uye magumo.
Zvimwe Ganda Witch maficha Ndizvo:
Kupona uye kutya. Naizvozvo, iwe hauzove nezviwanikwa zvisingaverengeki, asi izvo zvine mashoma. Uye zvakare, wedzera mapuzzle senge yakasarudzika bvunzo uye mune akasiyana mamiriro uye seti.
Iwe unokwanisa kuwana zvombo zvakawanda zvekusarudza kubva.
Inokutendera iwe kuti uite sarudzo.
Iwe uchafanirwa kubata nezvakasiyana zvisikwa zvinotyisa izvo zvaimbova vanhu. Zvakare, hazvisi nyore kuuraya ...
Sezvandambotaura, hausi mutsara wevhidhiyo mutsara. Unogona kusarudza nzira dzakasiyana siyana, kana kuita dzimwe sarudzo, kuputsa matuneti kudzivirira zvisikwa kuti zvisakubate, nezvimwe.
Muvhidhiyo yandakabatanidza iwe unogona kuwana pfungwa iri nani yekuti Ganda Witch richava rinenge rasvika kune yedu yatinoda chikuva. Asi sezvaungaona, rima nekuvhunduka ndizvo zvakakurisa mumutambo wevhidhiyo uyu. Saka kana iwe uchida kushandisa a "Yakanaka-yakaipa" nguva, iwe unoziva ... Ganda Muroyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Ganda Witch: nyowani inotyisa zita inouya kuLinux
Humwe humbowo hwekuti KDE iri kuita basa rakakura: Ubuntu Studio ichaenda kuPlasma
Firefox 76 inosvika pamwe nekuvandudzwa kweLockwise, WebGL nezvimwe